iPhone Cellular Nwelite okpu? Nke a bụ ihe mere & ndozi! - Iphone
gelmicin acne ude
kedu ka m ga -esi ehichapụ foto na iphone 6 m
iphone m nwụrụ na pasent 30
iPhone Cellular Nwelite okpu? Nke a bụ ihe mere & ndozi!
Can’t nweghị ike ịkpọ ma ọ bụ nata oku ma ọ bụ jiri data cellular na iPhone gị. Natara ọkwa banyere nkwalite cellular, mana ị maghị ihe ọ pụtara. N’isiokwu a, aga m eme ya -agwa ihe mere ihe iPhone cellular update okpu na-egosi gị otú idozi nsogbu ọma !
You Nwere iPhone 7?
A ole na ole nke iPhone 7 ụdị nwere ngwaike ntụpọ na-eme ka Cellular Mmelite na-egosi ngosi egosi. Ọ na-emekwa ka gị iPhone ngosi Enweghị Ọrụ na akaekpe aka ekpe nke ihuenyo ahụ, ọbụlagodi na ọrụ cellular dị.
Apple maara nsogbu a, ha na-enyekwa ngwaọrụ mmezi n'efu ma ọ bụrụ na iPhone 7 gị tozuru. Lelee weebụsaịtị nke Apple ka hụ ma ọ bụrụ na gị na iPhone 7 ruo eru maka a free idozi .
Idozi Nwa Oge Maka iPfọdụ iPhones
Fọdụ ndị mmadụ ekwuola na ịgbanyụ oku Wi-Fi na Voice LTE doziri nsogbu ahụ na iPhone ha. Nke a abughi ihe ngwọta zuru oke, ị ga-achọ ịlaghachi ma gbanwee Wi-Fi Calling na Voice LTE mgbe emesịrị iPhone gị na ụdị nke nso nso a nke iOS.
Ọ dịkwa mkpa ịkọwapụta na ọ bụghị ụgbọelu ikuku ọ bụla na-akwado ịkpọ Wi-Fi ma ọ bụ Voice LTE. Ọ bụrụ na ịhụghị nhọrọ ndị a na iPhone gị, gaa na nzọụkwụ ọzọ.
Mepee Ntọala wee pịa Cellular -> Ikpo Wi-Fi . Gbanyụọ ngbanwe dị n'akụkụ Ikpo Wi-Fi na iPhone a iji gbanyụọ oku Wi-Fi.
Na-esote, laghachi na Ntọala -> Cellular na pịa Nhọrọ data Cellular . Kpatụ Kwado LTE -> Naanị data iji gbanyụọ Voice LTE. Ga-amata na Voice LTE na-apụ apụ mgbe akara ngosi na-acha anụnụ anụnụ pụtara n’akụkụ Naanị data .
iphone rapaara na ọnọdụ ekweisi
Gbanyụọ Ọnọdụ ụgbọelu wee laghachi
Gị iPhone agaghị ejikọ na netwọk cellular ma ọ bụrụ na agbanyere Ọnọdụ ụgbọelu. Mgbe ụfọdụ toggling ụgbọelu Mode on na anya ọzọ nwere ike idozi obere cellular Njikọta mbipụta.
Mepee Ntọala wee pịa ngbanwe na-esote Ọnọdụ ụgbọelu iji gbanye ya. Kpatụ mgba ọkụ ọzọ iji gbanyụọ ya. ’Ll ga-amara Ọnọdụ ụgbọ elu na-apụ apụ mgbe mgbe mgba ọkụ na-acha ọcha.
Gbanyụọ data cellular ma laghachi na
Quickzọ ọzọ dị mfe iji dozie obere nsogbu njikọ sịnịma bụ ịgbanye Cellular Data ma laghachi na ya. Nke a anaghị arụ ọrụ mgbe niile, mana ọ naghị afụ ụfụ ịnwale.
Mepee Ntọala wee pịa Cellular . Mgbe ahụ, kpatụ mgba ọkụ na-esote Cellular Data na elu ihuenyo ahụ iji gbanyụọ ya. Kpatụ mgba ọkụ ọzọ iji gbanwee Cellular Data azụ.
kedu ihe mere ngwa m ji na -emechi
Mmelite ntọala ụgbọelu bụ mmelite nke ekwentị gị ma ọ bụ Apple wepụtara iji melite ike iPhone gị ijikọ na netwọọdụ cellular gị. A naghị ewepụta mmelite ntọala ụgbọelu dịka mmelite iOS, mana ọ dị mkpa ịlele oge niile iji hụ ma ọ dị.
Meghee Ntọala na pịa Banyere ịlele maka mmelite ntọala ụgbọelu. Ọ bụrụ na mmelite dị, mmapụta ga-apụta n'ime ihe dị ka sekọnd iri.
Kpatụ Mmelite ma ọ bụrụ na a ụgbọelu ntọala melite dị. Ọ bụrụ na mmelite adịghị, gaa na nzọụkwụ ọzọ.
Melite iOS Na Gị iPhone
Apple na-ewepụta mmelite iOS mgbe ụfọdụ iji webata atụmatụ ọhụrụ ma dozie nchinchi dị ka nke ị na-enwe ugbu a. Meghee Ntọala na pịa General -> Mmelite ngwanrọ iji hụ ma ọ bụrụ na mmelite iOS dị. Kpatụ Ibudata na Wụnye ọ bụrụ na ngwanrọ ngwanrọ dị.
Dụgharịa ma tinyegharịa Kaadị SIM gị
Ebe ọ bụ na ọ bụghị ihe ọhụrụ maka gị iPhone na-ekwu Mba SIM mgbe ị na-enweta Cellular Mmelite na-emeghị ngosi, ọ bụ ezi echiche ịpụpụ kaadị SIM gị ma weghachite ya.
Jidere ngwa ọrụ ejector kaadị SIM gị ma ọ bụ, ebe ọ bụ na ị nwere ike ịnweghị otu n'ime ndị ahụ, dozie mpempe akwụkwọ. Nọgide na ejector ngwá ọrụ ma ọ bụ gị akwụkwọ clip n'ime oghere na kaadị SIM kaadị ka gbapụta ya na-emeghe. Inye kaadị SIM kaadị azụ gị iPhone ka reseat SIM kaadị.
Tọgharia gị iPhone si Network Ntọala
Ettọgharị ntọala ntọala na-ehichapụ ihe niile Cellular, Wi-Fi, Bluetooth, VPN ntọala na iPhone gị. Site ihicha niile nke netwọk ntọala ozugbo, ị nwere ike mgbe ụfọdụ idozi a na-eweta nsogbu software nke.
Mepee Ntọala wee pịa General -> Tọgharia -> Tọgharia Ntọala Ntọala . Kpatụ Tọgharia Ntọala Ntọala iji kwado mkpebi gị.
The DFU weghachi bụ ihe kasị dị omimi iPhone weghachi. Ọ bụla otu akara nke koodu na-ehichapu na reloaded, resetting gị iPhone ka factory defaults.
ekwentị na -aga ozugbo na ozi olu
Gbaa mbọ hụ na ị azọpụta ndabere gị iPhone tupu etinye ya na ọnọdụ DFU! Ihe niile ego n'anya kpochapụrụ gị iPhone n'oge DFU weghachi usoro. Chekwa ndabere ga-eme ka ị ghara ida foto ọ bụla, vidiyo, na faịlụ ndị ọzọ echekwara.
Mgbe edoziri gị, lelee isiokwu anyị ọzọ iji mụta -esi etinye gị iPhone na DFU mode ma weghachi!
Kpọtụrụ Apple Ma ọ bụ Cargbọelu Ikuku Gị
’Ll ga-achọ ịkpọtụrụ Apple ma ọ bụ onye na-ahụ maka ikuku gị ma ọ bụrụ na iPhone gị ka na-ekwu na Cellular Mmelite Dara mgbe ịtinyere ọnọdụ DFU. Enwere ike inwe nsogbu na modem cellular gị iPhone.
Debe oge na Applelọ Ahịa Apple gị iji hụ ma ọ bụrụ na Apple tech nwere ike inyere gị aka idozi nsogbu ahụ. Otú ọ dị, atụla anya ma ọ bụrụ na Apple gwara gị ka gị na onye na-ahụ maka ikuku gị kpọtụrụ. Enwere ike inwe nsogbu dị mgbagwoju anya na akaụntụ gị nke naanị onye na-ahụ maka ọrụ ndị ahịa nke onye na-ahụ maka ikuku ga-egbo.
Ndị a bụ nọmba ekwentị ndị ahịa nke nnukwu nnukwu ụgbọelu ise na United States:
Emelitere Ma Dị njikere ịga!
’Ve dozie nsogbu ahụ na iPhone gị ma ị nwere ike ịmalite ịkpọ oku ọzọ! Jide n'aka na ịkekọrịta isiokwu a na mgbasa ozi mmekọrịta iji kụziere ndị ezinụlọ gị na ndị enyi ihe ị ga-eme mgbe iPhone ha kwuru na Mmelite Cellular Emezighị. Enwere onwe gị ịhapụ ajụjụ ọ bụla ọzọ ị nwere gbasara iPhone na ngalaba ndị dị n'okpuru.